China China Yakaderera Mutengo Zvigadzirwa Yakatungamira Fekitori Polyester Pillow vagadziri-Rayson | Rayson
Ichi chigadzirwa chine hypoallergenic. Micheka yayo haibvumidze hunyoro inova iyo yakakwana ecosystem yebhakitiriya uye hutachiona kuti hubereke kuvaka.
1.Matirasi yako inogara kwenguva yakareba sei?
Matiresi yega yega yakasiyana. Ukakanda husiku kana kumuka uchirwadziwa inguva yekuwana matiresi nyowani zvisinei nezera rayo. Tinokurudzira kutarisa mutemo wemutemo uye kutsiva angangoita makore masere ese.
2.Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzaunogamuchira?
LC pakuona / neTT, 30% Deposi uye 70% chiyero chiri pamusoro pemakopi ezvinyorwa zvekutumira witinin mazuva manomwe ekushanda.
3.Ndingawana sei mimwe mienzaniso
Mushure mekusimbisa chipo chedu uye titumirei mutengo wekuenzanisira, tichapedzisa mharidzo mukati memazuva gumi nemashanu kusvika makumi maviri. Iwe unogona kukumbira iyo yakajeka kambani kuti itore iyo sampuro kubva kukambani yedu kana iwe unogona kuti titumire DHL, FedEx kana UPS kuunganidza nhamba account, tinogona kutumira iyo sampuro kwauri neakaunzi yako.
1.Vatengi vanoda kuziva zvakawanda nezve chigadzirwa chedu chitsva kana kambani yedu, taura nesu chete.
2.We tinonyatsoteedzera yakajairwa mhando yekudzora maitiro kuona kuti zvigadzirwa zvedu zvinosangana kana kupfuura vatengi vedu zvinotarisirwa. Uye zvakare, isu tinopa mushure-yekutengesa masevhisi evatengi pasirese pasirese.
3.Since yakasimbiswa, Rayson inovavarira kupa yakatanhamara uye inoshamisa mhinduro kune vatengi vedu. Isu tasimbisa yedu yedu R & D nzvimbo yekugadzira zvigadzirwa uye chigadzirwa chigadzirwa.
4.Tinovimbisa kuti zvigadzirwa zvinotumirwa kune vatengi zvakachengeteka uye zvine mutsindo. Kana iwe uine chero mibvunzo kana uchida kuziva zvakawanda nezvedu, tifonere isu zvakananga.
Rayson Global Co, Ltd mubatanidzwa weSino-US, yakavambwa muna 2007 iyo iri muShishan Town, Foshan High-Tech Zone, uye yakagara padyo nemabhizimusi ane mukurumbira seVolkswagen, Honda Auto uye Chimei Innolux maminetsi makumi mana nemotokari kubva kuGuangzhou Baiyun International Airport uye Canton Fair Exhibition Hall. Hofisi yedu yemusoro " JINGXIN >> isina rakarukwa jira (1800tons / mwedzi) vagadziri muChina vane vanopfuura mazana manomwe vashandi. Inopfuura 90% yezvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kuEurope, maAmerican, Australia nedzimwe nzvimbo dzepasi. Isu tinopa mateti emametiresi kuSerta, Sealy, Kingkoil, Slumberland uye mamwe mazita emamatiresi epasi rese. Rayson inogona kuburitsa homwe yechirimo yemetiresi, bonnell chitubu chemetiresi, inoenderera yechirimo metiresi, ndangariro furo mamatiresi, furo matiresi uye latex metiresi etc. "